I-villa yesimanje eduze kwehlathi namachibi eFriesland
I-Rijs itholakala eFriesland, isifundazwe esidumile engxenyeni esenyakatho ye-Netherlands enamadolobha amahle, amachibi nehlathi. I-Rijs nendawo eyizungezile inikeza imisebenzi eminingi ye-waterport, ukuhamba ngebhayisikili kanye nezindlela zokuhamba. Amaminithi ukusuka lapho, ungathola izindawo zokudlela ezinhle nohambo lwasehlathini, noma uhambe kancane uye olwandle. Amadolobhana aseduze ahlinzeka ngokuthenga okuphawulekayo, imicimbi yamasiko, igalofu noma ukugibela amahhashi. Isitolo segrosa sikumakhilomitha ayi-1.5, kanti indawo yezitolo iqhele ngamakhilomitha ayi-5!
Indlu yaklanywa umakhi wendawo ngeminyaka yawo-1970 futhi inomklamo wezinga lokuhlukanisa onezinhlobonhlobo zamafasitela angunxantathu, ayindilinga kanye nawonxande. Ingaphakathi lekhaya lilungiswe kahle ngo-2018, futhi okwamanje sisebenzela ukungeza okunye ukwakheka kwezwe. I-villa ihlome ngokuphelele ngakho konke okufisayo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Indawo engaphandle ihlanganisa igceke elikhulu elinotshani, i-patio enesethi yokuphumula, itafula nezihlalo, kanye ne-BBQ grill. Eminye imishini yokudlala yangaphandle, njenge-badminton namabhola, iyatholakala. Amathoyizi nemidlalo yasendlini, efana ne-chess, amakhadi okudlala kanye ne-Rummikub itholakala ekhoneni lezingane. Kukhona ne-Xbox enemidlalo ekamelweni elihlukile eline-TV yayo. Umbhede kanye nesihlalo esiphezulu kuyatholakala futhi.
I-Rijs iyidolobha elincane kodwa ngenxa yendawo yayo endaweni enhle eduze nezinkuni namanzi, kunezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezihamba ibanga lakho konke ukunambitheka kanye nesabelomali. Yeqa umgwaqo bese uphefumula ngemizwa ye-'Rijsterbos', ihlathi elineminyaka engama-300 ubudala. Izingane zizothanda ukuhlola i-speelpark ye-Sybrandy. I-Villapark inama-villas ayi-12. Ungakhohlwa ukuhlola umjondolo ongaphesheya komgwaqo ukuze uthole ukudla okuthosiwe kwe-Dutch, u-ayisikhilimu nokunye...
Ekufikeni sizokwamukela endlini. Sizokunikeza uhambo futhi siphendule imibuzo ongase ube nayo.
Sitholakala kalula ngo-whatsapp. kanye ne-imeyili futhi othile angatholakala endlini phakathi nemizuzu engu-15 uma kudingeka.